Otu esi ejikọ Alexa na ọkụ 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
O doro anya na ọkụ ndị na-acha ọkụ ọkụ bụ nzọụkwụ mbụ iji mee ka echiche ụlọ nke akpaaka ụlọ pụta, ya bụ, njikwa ntanetị (ọbụlagodi na enyemaka nke iwu olu) nke ngwaọrụ eletriki anyị niile. Ọ bụrụ na anyị kpebiri ịzụta otu ma ọ bụ karịa smart bulbs na anyị chọrọ ịchịkwa ha na iwu olu nyere site Amazon ikwughachi na Alexa, na a ndu anyị ga-egosi gị esi jikọọ Alexa ka ọkụ na ihe olu iwu anyị nwere ike iji na ha.
Dị ka a isi, anyị ga-egosi gị nke smart ọkụ ndabara dakọtara na Alexa na Amazon ikwughachi, iji jide n'aka na ị nwere ike n'ụzọ ziri ezi hazi olu iwu ha.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Amazon Alexa: Otu Esi Ewu Routines na Iwu Ọhụụ
Ìhè na plọg dakọtara na Amazon Alexa
Tupu anyị emee ihe ọ bụla na iwu olu, anyị kwesịrị ijide n'aka na ọkụ ọkụ dabara na Alexa; ma ọ bụghị na anyị agaghị enwe ike ịgbakwunye ha na sistemụ ma jikwaa ha nke ọma. Ọ bụrụ na anyị azụworị ọkụ ọkụ dị mma, anyị na-enyocha ma ọ bụrụ na "dakọtara na Amazon Alexa" ma ọ bụ "dakọtara na Amazon Echo" akọwapụtara na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ na akwụkwọ ntuziaka.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ọkụ ma ọ bụ bọlbụ kwekọrọ, anyị nwere ike ịtụle ịzụta otu Alexa ọkụ ọkụ dakọtara, dị ka ụdị ndị edepụtara n'okpuru.
Philips Lighting Hue White Lampadine ikanam (€ 30)
Bọlbụ TP-Link KL110 Wi-Fi E27, Na-arụ ọrụ na Amazon Alexa (€ 14)
Smart bọlbụ, LOFTer E27 RGB 7W WiFi smart bọlbụ (€ 16)
Smart bọlbụ E27 AISIRER (2 iberibe, 2nd €)
TECKIN E27 multicolor dimmable smart ikanam bọlbụ (€ 49)
Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, anyị ga-achọ iji bulbs ndị anyị nwere (na-enweghị ndakọrịta), anyị nwekwara ike ịtụle ịzụta ihe nkwụnye ọkụ maka bọlbụ ọ bụla, dịka nke a na-enye Smart WiFi E27 Light soket, Aicase Intelligent WLAN (€ 29).
Anyị chọrọ ịmegharị ọkụ n'ime ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ (ndị nwere plọg ụfọdụ)? N'okwu a, anyị nwere ike ịchekwa na ịzụrụ bọlbụ smart site n'ilekwasị anya kama na ntọala Wi-Fi mara mma, dị ka ndị edepụtara n'okpuru.
Presa Intelligent WiFi Smart Plug Telecomando ZOOZEE (€ 14)
Ogwe ike Philips Hue (€ 41)
Oghere TP-Link HS110 Wi-Fi na nlekota ike (€ 29)
Smart nkwụnye WiFi Smart nkwụnye Power nyochaa nkwụnye (4 iberibe, € 20)
Ngwaahịa niile edepụtara dakọtara na Alexa, ihe niile anyị ga - eme bụ ijikọ ha na netwọ Wi-Fi anyị (ịgbaso ntuziaka dị na ntuziaka onye ọrụ), jiri ngwa dị iche iche hazie ohere dịpụrụ adịpụ (a ga-ajụ anyị ka anyị mepụta akaụntụ ọhụrụ ), na, ọ bụrụ naanị ntọala a bụ isi, anyị nwere ike ịga n'ihu na ntọala Alexa.
Jikọọ ọkụ na Amazon Alexa
Mgbe ijikọ smart bulbs (ma ọ bụ ihe akwadoro plọg ma ọ bụ ihe nkwụnye) na-enwe ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị jikọọ na netwọk Wi-Fi, ka anyị nweta ama ma wụnye ngwa ahụ Amazon Alexa, dị maka gam akporo na iOS.
Mgbe ibudata ngwa ahụ, bido ya ma banye na akaụntụ Amazon anyị. Ọ bụrụ na anyị enweghị akaụntụ Amazon, anyị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa n'ime ngwa ma ọ bụ na webụsaịtị gọọmentị.
Mgbe ịbanye, anyị pịa Ngwaọrụ N'okpuru aka nri, họrọ bọtịnụ + n'elu aka nri wee pịa Tinye ngwaọrụ. Na ihuenyo ọhụrụ anyị na-ahọrọ nhọrọ dabere na ụdị ngwaọrụ iji hazie: Bọlbụ ọkụ hazie bọlbụ nwere ọgụgụ isi; Ndi oru nta akuko a sị na anyị nwere njigide smart ma ọ bụ Gbanwee a sị na anyị ahọrọla Wi-Fi nkwụnye maka otu bọlbụ.
Ugbu a ka anyị banye Kedu ika ọ bụ ?, anyị na-ahọrọ akara nke ngwaọrụ anyị, anyị na-ahọrọ bọtịnụ ahụ Jide ka iji mgbe ahụ anyị emetụ mmewere aka Kwado iji; ugbu a, a ga-ajụ anyị maka nnweta nnweta na ọrụ metụtara ọkụ, ntọala ma ọ bụ ngbanwe zụrụ (dị ka a hụrụ n'isiakwụkwọ gara aga). Ozugbo itinyere nzere ziri ezi, họrọ naanị Njikọ ugbu a ịgbakwunye njikwa ngwaọrụ n'ime Alexa.
Ọ bụrụ na ụdị ngwaọrụ ahụ apụta, anyị nwere ike imetụ aka mgbe niile Ndị ọzọ ma jiri aka hazie ngwaọrụ ahụ, ka ọ pụta n'ime Alexa. Mgbe ijikọ, naanị anyị ga-ahọrọ aha maka ngwaọrụ ahụ, n'ime ụlọ ma ọ bụ ụdị ịtinye ya (Kitchen, Ime ụlọ, wdg) wee pịa Emela.
N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-egosi gị otu esi eji iwu olu iji chịkwaa ọkụ Alexa.
Iwu olu iji jikwaa ọkụ
Mgbe ị gbakwunyechara ngwaọrụ niile na ngwa Alexa, anyị nwere ike iji iwu olu site na ngwa Alexa ma ọ bụ na Amazon Echo guzobere na otu akaụntụ Amazon ejiri maka ntọala.
Nke a bụ ndepụta nke iwu anyị nwere ike iji jikwaa ọkụ na Alexa:
"Alexa, gbanye ọkụ [stanza]"
"Alexa, gbanye [nome ngwaọrụ]"
"Alexa, gbanye ọkụ niile dị n'ime ime ụlọ ahụ"
"Alexa, gbanyụọ ọkụ niile dị n'ụlọ ahụ"
"Alexa, gbanye ọkụ ụlọ obibi na elekere isii nke mgbede"
"Alexa, kpọtee m n'elekere asatọ nke mgbede wee gbanye ọkụ niile dị n'ụlọ"
Ndị a bụ ụfọdụ iwu iwu anyị nwere ike iji ozugbo ọkụ setịpụrụ na Alexa. Maka ozi ndị ọzọ, anyị na-akpọ gị òkù ka ị gụọ ntuziaka anyị Atụmatụ nke Amazon ikwughachi, ihe ọ bụ maka na ihe ọ bụ maka.
Otu akụkụ dị mkpa nke akpaaka ụlọ nke ọdịnihu bụ ọnụnọ nke ọkụ ọkụ nwere ike ịchịkwa site na ndị na-enyere aka na olu dị ka Amazon Alexa, nke ga-enye gị ohere ịnweta oke njikwa na ngwaọrụ dakọtara.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime otu mgbanwe na Homelọ Google (yabụ jiri Google Assistant) mee ihe, anyị ga-akwado ka ị gụọ akụkọ anyị Ihe Homelọ Google nwere ike ịme: onye enyemaka olu, egwu na akpaaka ụlọ. Amaghị ihe ị ga-ahọrọ n'etiti Amazon Alexa na Google Home? Anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ azịza nye ajụjụ gị na nyocha miri emi anyị. Alexa ma ọ bụ ụlọ Google? ntụnyere n’etiti ndị ọkà okwu amamịghe kacha mma na ndị nwere ọgụgụ isi.
Kedu ihe FWA pụtara, ihe ọzọ na eriri maka ịntanetị ọsọ ọsọ?
Etu esi ahazi Gmail ihe kacha mma
Etu ị ga - esi gee egwu Google na - enyere aka na akwu
Esi gbanye ndepụta okwu na TV
Etu esi akwụ ụgwọ ekwentị gị na-enweghị chaja
Etu esi ege egwu na elele amamịghe (gam akporo, Apple na ndị ọzọ)
Etu esi etinye TV na ọnọdụ nọrọ na njikere
Mepụta egwu ọhụrụ na ọgụgụ isi
Kacha mma ngosi mmịfe onye ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo na iPhone
Ngwa gam akporo 11 kacha mma - Otu esi enweta ha na ekwentị ọ bụla
Kedu onye na-arụ ọrụ ekwentị nwere Internetntanetị kachasị ọsọ na 4G LTE?
Esi edozi ndabara nchọgharị na iPhone
Etu esi lelee Mediaset Play na TV
Ekwentị kachasị mma, ekwentị anaghị emebi emebi: nke ndị ị ga-ahọrọ
Etu esi eji Google Lens na gam akporo na iPhone / iPad
OLED ma ọ bụ QLED: gịnị bụ teknụzụ kachasị mma maka TV ọhụrụ?